Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Sina mampiseho fanarenana matanjaka
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » China Travel News » Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Sina mampiseho fanarenana matanjaka
Ny fangatahana fitsangatsanganana an-tanàna fialan-tsasatra, fialan-tsasatra any ambanivohitra, fitsangatsanganana amin'ny fianakaviana ary fitsangatsanganana dia nampiseho fironana ambony
Ny sehatry ny fizahantany ao Shina dia nitatitra isa mahaliana nandritra ny fialantsasatry ny Fetiben'ny Lohataona
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina sivily nizotra tamin'ny 23.95 tapitrisa teo ho eo ny mpandeha tamin'ny Febroary
Ny fitomboan'ny famandrihana trano fandraisam-bahiny koa dia manondro ny fahavonanan'ny olona hanao dia lavitra
Raha ny angom-baovao avy amin'ny China Tourism Academy, ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany ao amin'ny firenena dia naneho fanarenana matanjaka hatreto amin'ity taona ity ary antenaina hitohy ny vanim-potoana misy azy ankehitriny satria i China dia manalefaka sy manala ny fameperana ny dia noho ny toe-javatra voan'ny coronavirus.
Ny sehatry ny fizahan-tany any Sina dia nitatitra isa mahaliana nandritra ny fialantsasatry ny Fetiben'ny Lohataona tamin'ny tapaky ny volana febrily, niaraka tamin'ny fitomboan'ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany isan-taona manomboka amin'ny andro fahatelo amin'ny fialantsasatra maharitra herinandro, raha ny isan'ny mpizahatany mitsangatsangana sy mizaha tany amin'ny mpizahatany lehibe Ireo toerana itodiana toa an'i Guangdong, Shanghai ary Beijing dia nihoatra na saika nahatratra ny ambaratonga hita nandritra ny Fetiben'ny lohataona 2019.
Ny fangatahana fitsangatsanganana an-tanàna fialan-tsasatra, fialan-tsasatra any ambanivohitra, fitsangatsanganana amin'ny fianakaviana ary fitsangatsanganana dia nampiseho fironana ambony miakatra, hoy ny akademia.
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina sivily ao amin'ny firenena dia nitantana fitsangatsanganana 23.95 tapitrisa teo ho eo tamin'ny volana febroary, fitsambikinana 187.1 isan-jato isan-taona, nasehon'ny antontan-taratasy farany avy amin'ny Administratera Aviation Civil of China.
Ny fitsangatsanganana an-habakabaka dia naka ny setroka taorinan'ny fialantsasatra, izay fotoana izay dia nisafidy ny hijanona ny sinoa maro hamaly ny antson'ny governemanta hisorohana ny fivoriana tsy ilaina.
Ny fifamoivoizana ataon'ireo mpandeha amin'ny zotra anatiny dia niverina tamin'ny ambaratonga hita nandritra io fotoana io ihany tamin'ny taona 2019, raha ny angom-baovao avy amin'ireo mpanome tolotra fitsangatsanganana an-tserasera.
Ny fitomboan'ny famandrihana trano fandraisam-bahiny koa dia nanondro ny fahavonanan'ny olona hanao dia lavitra. Sanya, Wuxi ary Lhasa dia iray amin'ireo toeran-kaleha ankafizin'ny mpizahatany.
Ny isan'ny famandrihana trano fandraisam-bahiny tamin'ny 1 Mey, andro voalohany amin'ny fialantsasatra dimy andro ho an'ny May, dia nihoatra ny isa nanomboka tamin'io andro io ihany tamin'ny taona 2019, naseho ny angona.
Nanamaivana ny fameperana COVID-19 i Beijing satria tsy nahita tranga vaovao nafindra teto an-toerana ny renivohitra sinoa nandritra ny iray volana mahery.
Ireo izay mandeha avy any amin'ny faritra mora iharan-doza ary tonga any Beijing dia tsy takiana ny hanome valin'ny fitsapana asidra nokleika ratsy, ary hiverina indray ny serivisy taxi sy ny fiara an-tserasera eo anelanelan'ny Beijing sy ny tanàna hafa.
Tsy ilaina ihany koa ny fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny fidiran'ny vondrom-piarahamonina sy ny tanàna, fa ny toeram-pialamboly sy fialamboly anatiny sy ivelany toy ny zaridaina, toerana mahafinaritra, tranomboky, tranombakoka ary teatra dia avela hitazona hatramin'ny 75 isan-jaton'ny fahaizan'ny mpitsidika azy ireo.
Nasehon'ny angon-drakitra ny fiakaran'ny vidin'ny tapakila fiaramanidina sy fiaran-dalamby tao Beijing sy tany ivelany avy hatrany taorian'ny fanambarana nataon'ny governemanta monisipaly.
Nilaza ireo tao anaty indostria fa mampiasa ny fialantsasatra ho avy ny olona hanonerana ireo dia nodinihiny teo aloha.
Ny vidin'ny dia, fampiantranoana ary tapakila fidirana mankamin'ny toerana ara-kolotsaina sy fialamboly dia nihena be hatramin'ny nipoahan'ny COVID-19, ary ny governemanta sasany eo an-toerana dia mety manohy manolotra tapakila fitsangatsanganana hitaona ny mpizahatany, mamela ny olona hanao fialan-tsasatra lafo vidy amin'ity taona ity.
Araka ny tatitra farany, tombanana ho 4.1 lavitrisa ny fitsangatsanganana an-trano any China amin'ity taona ity, ka hatramin'ny 42 isan-jato izany hatramin'ny 2020.
Ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany eto an-toerana dia antenaina hitombo 48 isan-jato hahatratra 3.3 trillion yuan (eo amin'ny 507.47 miliara dolara amerikana).
Ny fitomboan'ny harinkarenan'i Shina dia nangonina tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ny 2021, miaraka amin'ireo tondro ara-toekarena lehibe toy ny fitrandrahana indostrialy, ny varotra antsinjarany ary ny fampiasam-bola raikitra mihoatry ny 30 isan-jato, araka ny angon-drakitra navoakan'ny Birao Nasionalin'ny statistika androany.
Nanasa ireo mpandeha salama saina i Nevis ho any "Just Be" any Nevis
Nanitatra hatramin'ny tapaky ny volana aprily ny fandraràn'ny sidina an'i Rosiana UK